Fumanisa iitattoo zeentyatyambo kunye neemilo zejiyometri | Ukuzoba
Susana Garcia | | Iitatoo, Iitatto ezinemilo, Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Las iintyatyambo zine tattoo engasoze yaphuma kwisitayile, kwaye zizinto zendalo zezona zintle kakhulu ezikhoyo. Kodwa ezi ntlobo zeetatto zixutywe nezona ndlela zangoku zokwenza ukuba iitattoos ezinomdla kakhulu ezinjengezo zivela ngokudibanisa iintyatyambo kunye neemilo zejiyometri, le yenye yeendlela zamva nje.
Sobona ezinye iitattoo ezintle ezisebenzisa iintyatyambo, kunye nobuhle bayo bendalo, kunye neemilo zejiyometri, ezigqibeleleyo, ukudala ukubhangqwa okugqibeleleyo. Ukuphefumlelwa kwahluka ngokwenene, njengoko zininzi iindlela zokumela obu buhle bugqibeleleyo bezinto ezimbini.
1 Iiroses ezingunaphakade
2 Iintyatyambo ngaphakathi koonxantathu
3 IJometri kunye neentyatyambo ezinombala ochukumisayo
4 Iitattoos kwiithoni ezimnyama
Ukuba kukho intyatyambo esithanda ukuyibona kwiiattoos kwaye ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zidumileyo, yirosi. Imele ubuhle buqu, ngameva alo kunye namagqabi alo athambileyo, ngomxube ofanelekileyo phakathi kwamandla kunye nobumnandi. Yiyo loo nto icwangciswe kakuhle kwiitatto ezinje. Kule meko sibona ezinye izimvo zokuzixuba kunye neemilo zejiyometri, ukusuka kongeze umbala omncinci ukwenza umvambo ogcwele iinkcukacha.
Iintyatyambo ngaphakathi koonxantathu
El unxantathu yimilo emele ukugqibelela, egqibeleleyo. Kwezi tattoos, intyatyambo okanye ezininzi ziyongezwa ngaphakathi, kungoko kunciphisa umvambo oqhele ukuma ngokungafaniyo, ngokungathi siyibona esipilini.
IJometri kunye neentyatyambo ezinombala ochukumisayo
Siyayithanda le nto Iziphumo apho zibonelela ngombala kuphela kummandla wonxantathu, ngokungathi yindlela yokubona umhlaba unombala. Yitattoo yoqobo yokwenyani apho badibanisa imibala emininzi.
Iitattoos kwiithoni ezimnyama
Ungabaphosi abanye Inkuthazo apho kukho i-inki emnyama kuphela. Izimvo ezibuthathaka ezinobuhle obuninzi kunye neemilo zazo zejometri ezidibeneyo. Yintoni oyithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Iitattoos ezixuba iintyatyambo kunye neemilo zejiyometri